Linux 4.17.1 yakaburitsa iyi "mini" kernel vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Linux 4.17.1 yakaburitsa iyi "mini" vhezheni yeiyo kernel
Iyo vhezheni yave kuwanikwa Linux 4.17.1, iyo kernel yemahara inoenderera mberi kusimudzira kwayo kusingamisike uye ikozvino tine Frist Point iyi. Vhiki chete mushure mekuburitswa kweLinux 4.17 dzakateedzana, Greg Kroah-Hartman, Linus Torvalds 'ruoko rwerudyi, akazivisa kuwanikwa kweiyi kernel, yekutanga vhezheni ine zvimwe zvitsva zvinoenzaniswa nekuburitswa kwekutanga kwebazi idzva iri.
Kunyangwe kuve kusunungurwa kudiki, mini nadzurudzo, izvozvo hazviregi kuva zvinonakidza. Iyo Linux kernel 4.17.1 inongoshanduka mumafaira makumi maviri nematatu zvine chekuita neiyo base 23, pamusoro pekusanganisira kuisirwa 4.17 kodhi uye kubviswa makumi matanhatu neshanu kwezvikamu izvo zvaive zvisisina basa kuchengetedza masosi sechiedza uye akachena sezvinobvira, senguva dzose. Idzi nhau, kunyangwe dzichiita senge shoma maererano nehukuru kuburitswa, ichiri kuvandudza kwatinogona kutonakidzwa mune yedu GNU / Linux distros kana tasarudza kugadzirisa iyo kernel.
Unogona kuwana izvo zviwanikwa muGit, senge pachayo Greg akataura: «Ndiri kuzivisa kuburitswa kwe kernel 4.17.1. Vese vashandisi veiyo 4.17 kernel akateedzana vanofanirwa kukwidziridza kune iyi vhezheni. Muti 4.17 inogadziridzwa mu git«. Saka kana iwe uchifarira iyi nyowani nyowani, iwe unoziva… mukana wekuvandudza bazi rakatangwa naLinus Torvalds munaChikumi 3rd kutanga 4.17. Nenzira, uye kunyangwe isina kukodzera zvakanyanya, inogona kuchinjwa kuita 5.x kuverenga.
Pindai chii chitsva muLinux 4.17.1 Pane zvimwe zvinoshandurwa kuti zviitwe nekukurumidza uye nekuvandudza kuenderana neyakaomarara, senge kuvandudzwa kwekutsigirwa kwemamwe maumbirwo akadai seMetag, M32R, FR-V, CRIS, Blackfin, RISC, nezvimwe zvinoshandiswa mumakomputa ako ega, ivo varipo mune kuwanda kwemidziyo uye yakadzika iyo inoshandisa Linux. Pamusoro pezvo panewo nhau dze AMD GPUs, HDMI kurira, uye zvimwe zvinogadziriswa zvebug.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 4.17.1 yakaburitsa iyi "mini" vhezheni yeiyo kernel